#ထိုင်း ရဲ မဖြေသေးတဲ့ မေးခွန်းများနဲ့ လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှု #Sanitsuda Ekachai | democracy for burma
#ထိုင်း ရဲ မဖြေသေးတဲ့ မေးခွန်းများနဲ့ လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှု #Sanitsuda Ekachai
tags: BRITISH TOURISTS, Burma, KOH TAO, migrant workers, MURDER CASE, Myanmar, Opinion, Police, Sanitsuda Ekachai, scapegoats
လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးထားသူ မြန်မာ ၂ ဦးနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ဓာတ်ပုံ-ဘန်ကောက်ပို့စ်
အလှည့်အပြောင်း၊ အလှိမ့်အပတ်တွေများခဲ့တဲ့ လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုဟာ သတင်း ၃ ပတ်ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။ ရဲတွေက တော့ နောက်ဆုံးမှာ မြန်မာပြည်က လူငယ်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ ၂ ဦးဟာ အစား ထိုးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ဓားစာခံတွေလို့ပဲ အများက ယုံကြည်လက်ခံထားကြပါ တယ်။
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး အဆင့်မြင့်အရာရှိ တဦးက တခါတုန်းက တီဗီအင်တာဗျူးတခုမှာ အကျဉ်းသားအားလုံး ရဲ့ တဝက်လောက်ဟာ တရားခံအဖြစ် အစားထိုးခံရတဲ့ ဓားစာခံတွေဖြစ်တယ်လို့ သူ့ယုံကြည်မှုကို ထည့်သွင်းပြောဆိုသွား ခဲ့ ဖူးပါတယ်။
လိပ်ကျွန်းဟာလည်း နတ်ပြည်တခုအလား နာမည်ကြီးတဲ့ ကျွန်းတကျွန်းပါ။ ဗြိတိန်ခရီးသွား ဟန်နာ ဝတ်သရစ်ခ်ျနဲ့ ဒေးဗစ် မီလာတို့ကို စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့က ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခံထားရတာ ကို တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံအပေါ် ကမ္ဘာ တဝန်းက မျက်လုံးတွေ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေရဲ့ သည်းခြေကြိုက် နိုင်ငံတခုအပေါ် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ယုံကြည် မှု ပြန်ရဖို့ ဒေါက်ထောက်ကြည့်
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံ သြဇာမရှိမှုအပေါ် မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်ပြီး တရားခံတွေ အဖြစ် ပုံသွင်းခံကြရတာပါ။
ဒီနောက်မှာတော့ သေဆုံးသွားတဲ့ ဒေးဗစ် မီလာရဲ့ အခန်းဖော်ဟာ မိန်းမလျာ တဦးအဖြစ် အတွေးပေါက်
ဒါပေမယ့် အဲဒီလူဆီက ရတဲ့ ဘောင်းဘီမှာ သွေးစွန်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စက သွေးမဟုတ်ပဲ ရွှံ့ပေတယ်ဆိုပြီး
တခါ စကော့တလန် ခရီးသွား က သေဆုံးသူ ဟန်နာကို ထိုင်းအမျိုးသား ၂ ဦးက ဗလက်ကာယပြုဖို့ ကြိုးစားနေတာ မြင်ရ ပြီး ဒေးဗစ်မီလာ က သူတို့ အသတ်ခံရတဲ့ညမှာ ဝင်ရောက်ဟန့်တားဖို့ ကြိုးစားခဲ့ တယ်လို့ ပြောပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ပို့စ်တခု တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သံသယဖြစ်ခံရသူတွေဟာ ထိုင်းတွေဆိုပြီး စတင်ဖြစ် လာပါတယ်။
အဲဒီ ထိုင်းလူမျိုး ၂ ဦးရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုလည်း သူက ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ တင်ခဲ့ပြီး ဒီလူ ၂ ဦးဟာ ကျွန်းပေါ်မှာ သြဇာကြီးသူတွေလို့ လည်း စကော့တလန်ခရီးသွားက ရေးထားတယ်။
လက်ရှိ ဝန်ကြီးချုပ် အာဏာသိမ်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယုဒ် ချန်အိုချာရဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် ဘီကီနီဝတ်တဲ့ကိစ္စ မှတ်ချက်ပေးမှုရှိခဲ့ပြီး နောက် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဝန်ကြီးရဲ့ အဆိုပြုချက်တင်ခဲ့တာ အဲဒီနောက် လူ ၂ဝဝ ကျော်ကို DNA စမ်းသပ်မှု လုပ်ခဲ့တာတွေနဲ့ ပြဇာတ်တပုဒ်လို ဖြစ်နေတဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို မြန်မာ အလုပ်သမား ဇော်လင်းနဲ့ ဝင်းဇော်ထွန်း တို့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ သတင်းပတ်က ဖမ်းဆီးလိုက်တာနဲ့ အဆုံးသပ်ပစ်လိုက်တယ်။
အဖမ်းခံထားရသူတွေက လူသတ်မှု ကျူးလွန်ကြောင်း ဝန်ခံတယ်လို့ ရဲက ပြောပြီး မူခင်းအထောက်အထား အခိုင်အမာ ရှိတယ်လို့ ရဲက ခုခံကာကွယ်ပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုထိကတော့ အဲဒီကိစ္စ ရဲပြောသွား တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများစုကို အယုံအကြည်လည်း မရှိသလို မေးခွန်းတွေ ကို ဖြေဆိုမှု မရှိတာလည်း ရှိနေပါတယ်။
မုဒိန်းကျင်မှု ရှိခဲ့၊ မရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့ ကနဦး မူခင်းတွေ့ရှိ ချက်တွေမှာ ဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲ ?
ရာဇဝတ်မှုကိစ္စမှာ ရခဲ့တဲ့ အသုံးပြုပြီးသား ကွန်ဒုံကို ဘာကြောင့် စစ်ဆေးဖို့ မပို့ခဲ့တာလဲ?
ဘာကြောင့် လိပ်ကျွန်း သူကြီးရဲ့ သားဖြစ်သူကို DNA မစစ်ဆေးခဲ့တာလဲ ?
ပြီးတော့ သံသယဖြစ်သူ တဦးလို့ ထုတ်ပြခဲ့တဲ့ CCTV ပြကွက်တခုမှာ ၂ မိနစ်ဖြတ်တောက်ထားကိစ္စက ဘာလဲ ?
အချုပ်အားဖြင့် ပြောရရင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ လူထု ယုံကြည်မှုလုံးလုံး ပျက်ပြားသွားတာကို ရင်ဆိုင်နေရ ပါပြီ။
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိပဲနဲ့ မြင့်မားတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို ဘယ်လို အောင်မြင်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင် မလဲ။ မရားတဲ့ နည်းလမ်းတွေဆက်သုံးနေတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ အဂတိလိုက်စားမှုတွေနဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေ ဟာ တရားဥပဒေနဲ့ တရားစီရင်ရေး စနစ်ကို ဘယ်လို ယုံကြည်နိုင်တော့ မှာလဲ။
ငွေပေး တရားနိုင်သူတွေ ရှိနေတာကြောင့် ရဲက လည်း ဥပဒေကို သားရေကွင်းလို လိုရင် လိုသလို မလိုရင် မလိုသလို လုပ်နေချိန်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာဟာ ဘာ အဓိပ္ပာယ်မှ မရှိဘူး။
ဒီကိစ္စဟာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို အရေးတကြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုပြီဆိုတာ ပြသလိုက်တာပါ။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဖြစ်မှုကြောင့် လူတွေအတွက် အားကိုး ယုံကြည်လို့ မရနိုင်ဘူးလို့ ခံစားရပြီဆိုရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကလည်း လုံခြုံမှု မရှိနိုင်ပါဘူး။
ဘန်ကောက်ပို့စ်ရဲ့ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့ ထုတ် သတင်းစာမှာ လက်ထောက် အယ်ဒီတာ မစ္စ Sanitsuda Ekachai ရေးသားတင်ပြထားတဲ့ Koh Tao case shatters faith in our police ဆိုသည့် သတင်းသုံးသပ်ချက်ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုထားပါတယ်။
← !! #သူက #Human #Rights #Commission of #Thailand #အမှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထားတာတစုံတရာရှိရင်ကျေးဇူးပြုပြီး
#THAILAND #ANDY #HALL #DEEP #CONCERN #Koh #Tao #murder #case …. →